Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS iyo dhiggiisa dalka Gabon oo ka wada hadlay xiriirka labada dal. | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS iyo dhiggiisa dalka Gabon oo ka wada hadlay xiriirka labada dal.
Muqdisho (SONNA)-January 21, 2022 – Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Mudane Cabdisaciid Muuse Cali, ayaa maanta oo Jimce ah khadka talefoonka wada hadal kula yeeshay dhiggiisa Arrimaha Dibadda ee dalka Gabon Mudane Pacôme Moublet-Boubeya, iyaga oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa dowladda Gabon ugu hambalyeeyey ka mid noqoshaheeda Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey horraantii bishan, isaga oo la wadaagay sida ay Soomaaliya uga go’an tahay in ay si hufan uga la shaqeyso arrimaha khuseeya nabadda iyo xasilloonida Gobolka Geeska Afrika.
Sidoo kale, Labada Wasiir ayaa wada hadalkooda diiradda ku saaray mustaqbalka xiriirka labo geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Gabon, iyo sidii looga wada shaqayn lahaa horumarinta iskaashi miro dhal ah oo ku qotoma danaha Labada Qaran, kaas oo taabanaya dhinacyada diblomaasiyadda, amniga, la dagaallanka argagixisada iyo dhaqaalaha.
Previous articleMareykanka iyo Ruushka oo kulan degdeg ah ku leh Geneva
Next articleMadaxweyne ku-xiggeenka Galmudug oo kormeer ku tagay Dhismaha garoonka diyaaradaha Caabudwaaq “SAWIRRO”